किन थाहा हुँदैन म को हुँ? | Martech Zone
शुक्रबार, अप्रिल 27, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
हामीले सहि ग्राहकहरू पाइरहेका छौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हाम्रा मार्केटिंग सम्बन्धी प्रक्वाइलिफाइहरू महत्वपूर्ण छन्। यदि हामी गलत ग्राहकहरुमा हस्ताक्षर गर्छौं, हामी तुरुन्तै जान्दछौं किनकि हाम्रो उत्पादकता ढिला हुन्छ, बैठक भोल्युम बढ्छ, र अधिक र अधिक निराशा सम्बन्धमा प्रवेश गर्दछ। हामी त्यो चाहँदैनौं। हामी ग्राहकहरू चाहान्छौं जुन हाम्रो प्रक्रिया बुझ्छ, हाम्रो सम्बन्धको महत्त्व दिन्छ र हामीले उनीहरूलाई पाइरहेका परिणामहरू देख्छौं।
आज दिउँसो मैले बनाउनु परेको थियो कल मेरो साथी र साथीलाई चाड पोलिट कुनो क्रिएटिवल मा। चाडको ठूलो विक्रेतासँग राम्रो सम्बन्ध छ जुन हामी किनिरहेका छौं। हाम्रो ब्लगको पहुँचको साथ, हामीले उनीहरूको उद्योगसँगको नजिकको सम्बन्ध, र हामीसँग मुख्य ग्राहकहरू छन् ... म पूर्ण विश्वस्त छु कि उनीहरूको कम्पनीका नेताहरू हामीसँग व्यापार गर्नका लागि प्रशंसा गर्नेछन्।
दुर्भाग्यवस, उनीहरूसँग एक इनबोर्डिंग प्रक्रिया छ कि म एक बिक्री व्यक्तिसँग कुरा गर्न आवश्यक छु, धेरै योग्यता प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्, एक च्यानल प्रबन्धकसँग कुरा गर्नुहोस्, च्यानल प्रबन्धकले पठाएको केहि भिडियो हेर्नुहोस्, करीव questions० प्रश्नहरूको साथ स्प्रेडशीटमा प्रतिक्रिया दिनुहोस् ... अनि भगवानले के जान्नुहुन्छ।
उनीहरूलाई थाहा छैन म को हुँ?
मेरो मतलब यो होइन कि ईगोसेन्ट्रिक झटका अर्थमा छ। म ईमानदारीसाथ निराश छु कि उनीहरू वास्तवमै थिए थाहा छैन म को हुँ! तिनीहरूको संगठन बढेको छ ... जसरी उनीहरूको प्रक्रियामा छ ... र तिनीहरूसँग अब तिनीहरूको बिक्री प्रक्रियामा आन्तरिक व्यक्तिहरूको एक तह छ जुन उद्योगसँग यति अपरिचित छ कि उनीहरूलाई वास्तवमै थाहा छैन कि यस भित्र मेरो राम्रो नाम र प्रतिष्ठा छ। म विश्वास गर्दिन कि उनीहरूले समयको लागि हेरे, कि त। म तिनीहरूको बिक्री फनेलमा बस अर्को नम्बर हुँ।
म निराश छु किनकि मैले मान्यता निर्माण गर्न कडा मेहनत गरें र मसँग भएको विशाल पीडा। म कुनै स्टीव जॉब्स छैन ... तर तिनीहरूको ईन्डस्ट्रीको सानो कोठा भित्र, म पक्का निश्चित छु कि म शीर्ष २ 25 व्यक्तिहरूमा देखाउँछु जुन उनीहरूले के गर्न प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्छन्, यसका बारे कुरा गर्छन्, र यसका बारे साझा गर्छन्। हाम्रो ब्लगको भित्र ठूलो पहुँच छ तिनीहरूको उद्योग, तर तिनीहरूको बिक्री प्रक्रियामा व्यक्तिहरू बेवास्ता गर्छन्।
यो बिक्री को एक महान उदाहरण हो प्रक्रिया गलत भयो। कम्पनीले मलाई सम्भव व्यवसायको लागि सम्पर्क गर्दा पहिलो चीज भनेको उनीहरूको अनुसन्धान गर्नु हो। कहिलेकाँही हामी व्यापार गर्दछौं किनकि उनीहरू एक उत्तम ग्राहक हुन… तर धेरै पटक हामी व्यापार गर्छौं किनकि यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हुनेछ।
म शायद स्प्रिडशिट भर्न जाँदैछु। चाडको सम्पर्कले उनीहरूले उद्योगमा अर्को नेतासँग साझेदार हुन चाहान्छन् कि गर्दैनन् भनेर म पर्खनेछु। यदि उनीहरू डेमोमा बसे र मैले हाम्रा ग्राहकहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्ने उपकरणहरू देखेका थिए भने तिनीहरू निराश हुनेछन् ... तर यदि उनीहरूले मलाई अयोग्य ठान्ने गरी मलाई 42२ चरण प्रक्रियामा राख्छ भने म को हो भनेर बुझ्नु भन्दा, I 'म निश्चित छैन कि म तिनीहरूसँग व्यापार गर्न चाहन्छु।
एक व्यापार सबै चीज एक प्रक्रिया मा फेंकिनु हुँदैन। प्रक्रियाहरू मेशिनहरूको लागि महान हो, तर मानवहरूले सोच्न सक्षम हुन्छन् र निर्णयहरू अविश्वसनीय निर्णय गर्दछन् जुन सधैं प्रक्रियामा फिट हुँदैन। तपाईंको सम्भावनाहरू स्प्रिडशिटमा प्रविष्टिहरू छैनन् ... तिनीहरू वास्तविक व्यक्तिहरू हुन्। तपाइँसँग सबै कुराको लागि अपवाद हुनुपर्दछ ... टाइमलाइन देखि बजेट, संसाधनहरूमा लागू। मँ सबैलाई मेरो आदर्श सम्भावनाहरु लाई महसुस भएको जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ म बुझ्छु उनीहरु को हुन्, किन ती महत्त्वपूर्ण छन्, र हामी तिनीहरूलाई कसरी मद्दत गर्न सक्दछौं.
यो विक्रेता पनि।
टैग: इनबाउन्ड मार्केटिङprequalifyनेतृत्व योग्यबिक्री सक्षमताबिक्री प्रक्रिया
अप्रिल 27, 2012 मा 8: 14 एएम
ब्रावो डग! मँ तपाईको ब्लगमा नयाँ छु र तपाईको जानकारीलाई धेरै मूल्यवान पाउँदछु। म तपाईंसँग सहमत छु, कहिलेकाँही बोटहरू टाढा राख्नुपर्दछ र उचित पार्टीहरू द्वारा व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ। अवधि
अप्रिल 27, 2012 मा 10: 11 एएम
प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण छ। यो सामान्यतया दुबै खरीददार र विक्रेतालाई मद्दत गर्दछ। तर कहिलेकाँही यसलाई संवादको पक्षमा राख्नुपर्दछ। बिक्रीको एक महत्त्वपूर्ण अंश प्रक्रियाबाट कहिले टाढा जान्ने र केवल व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्ने भन्ने बारे जान्नु हो।
र सहमत हुनुभयो कि 'अनुसन्धान महत्वपूर्ण छ'। सधै थाहा पाउनुहोस् तपाई कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद, डगलस। तपाईंको प्रतिक्रिया अभ्यासमा राख्नेछ।
अप्रिल 28, 2012 मा 3: 47 एएम
पहिलो पटक यहाँ र यहाँ तपाइँको बारेमा जान्न राम्रो लाग्यो। तपाईले यहाँ लेख्नु भएको सबै कुरा मनमोहक लाग्छ
र जानकारीमूलक। म यहाँ फर्कदैछु।
जुन 25, 2012 मा 1: 03 PM
चाहे तपाई ब्यापारको बृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ वा केवल
नयाँ टेक्नोलोजीको कार्यान्वयन, या त एक पनी Dehumanizing को प्रभाव छ र
व्यक्ति-देखि व्यक्ति सम्बन्ध deemphasizing। र यो वास्तव मा एक मार्केटिंग को लागी हो
कार्यकारीको फाइदा व्यक्ति-देखि-व्यक्ति व्यक्तिको लागि जोड दिने तरिका पत्ता लगाउन
सम्बन्धहरू, कम्पनी आकार र टेक्नोलोजीको प्रकार बिना वा उहाँ वा
उनी लागू गर्छिन्।
मेरो पेशेवर सेवाहरूको क्षेत्रमा, यदि मैले विकास गरेको छैन भने
उपभोक्तासँग सम्बन्ध, यदि म ठूलो कम्पनीमा सेवाहरू प्रदान गर्दै छु
वा एक सानो, म सामान्यतया ती सेवाहरूको बिक्री प्राप्त गर्न गइरहेको छु। यो हो
धेरै दुर्लभ छ कि म भर्खर एउटा फारम भर्नेछु, एक प्रश्नावली दिनेछु, एक अन्तर्वार्ता गर्नेछु
र त्यसपछि एउटा परियोजना प्राप्त गर्नुहोस्। यो केवल मेरो कामको लाइनमा हुँदैन; यो सधैं हुन्छ
सम्बन्धहरु बारे मेरो लागि, हरेक ग्राहकले तपाईलाई चिन्छ जस्तो महसुस गर्नुपर्दछ
उनीहरु। त्यो सम्बन्ध हो। र यदि तपाइँले बनाउने तरिका निकाल्न सक्नुहुन्न
ग्राहकहरु विशेष महसुस गर्छन्, तपाईको व्यवसाय हराउने छ।
डेभिड एस ज्याक्सन
Carlile Patchen & मर्फी LLP